Horudhac: Barcelona vs Espanyol… (Barca oo u baahan inay hal dhibic u jirsato Real Madrid & Espanyol oo rabta inay guuldarro ka fogaato si aysan ugu laaban heerka labaad) – Gool FM
(Barcelona) 08 Luulyo 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa doonaysa inay sare u qaado rajadeeda ay ka qabto ku guuleysiga horyaalka marka ay caawa soo dhoweynayaan naadiga Espanyol, waxaana haddii ay Barca kulanka guul gaarto ay hal dhibic kaliya ka hooseyn doontaa Real Madrid oo hogggaanka haysa inta aysan kulankeeda ciyaarin Los Blancos.
Espanyol oo ah kooxda ugu hooseysa horyaalka La Liga haatan ayaa 11 dhibcood u jirto booska lagu badbaado, waxaana ay xaqiijin doonaan inay u laabteen horyaalka heerka labaad haddii ay caawa guuldarro kala kulmaan kooxda Catalan.
Samuel Umtiti ayaa sii wadan doona ka soo ka bashada dhaawaca uu jilibka ka qabo, waxaana ay taasi ka dhigan tahay in daafaca dhexe ee Barca lagu arki doono Clement Lenglet iyo Gerard Pique.
Sergi Roberto ayaa sidoo kale sii wadan kara ka ciyaarista khadka dhexe ee kooxda martida loo yahay, iyadoo Nelson Semedo uu markale ka ciyaari doono daafaca midig.
Luis Suarez, Antoine Griezmann iyo Lionel Messi ayaa la filayaa inay hoggaamin doonaan markale weerarka Barcelona kaddib markii ay si wacan u dheeleen kulankii ay wajaheen Villarreal.
Jonathan Calleri ayaa ganaax kaga maqnaanaya kooxda martida ah kaddib markii casaan la siiyay xilli dambe kulankii Leganes.
Espanyol ayaa la rajeynayaa inay iska dayso weeraryahan ay doorbido inay khad dhexe buuxiso, iyadoo Sergi Darder uu khadka dhexe la dheeli doono David Lopez iyo Marc Roca.
Didac Vila ayaa ku soo laaban doona daafaca bidix ee kooxda martida ah, laakiin isbedello yar ayaa la rajeynayaa, inkastoo dhowaan uu qaab ciyaareedkiisii ugu xumaa soo bandhigay.
>- Kooxda Barcelona ayaan la garaacin 29-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Espanyol ayaa guuldarro la kulantay shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Barcelona ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Espanyol tartammada oo dhan.
>- Kooxda Barcelona ayaan la garaacin 12 ka mid ah 13-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay Espanyol tartammada oo dhan.
>- Kooxda Espanyol ayaa hal gool looga badiyey afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Barcelona ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Kooxda Barcelona ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Naadiga Espanyol tartammada oo dhan.
"Waxaan ahay madaxweyne, ciyaaryahan & tababare, horyaalkana waan qaadi lahayn haddii aan xilli hore imaan lahaa" – Zlatan Ibrahimovic